Monday July 17, 2017 - 17:58:12 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa cadeeyey hadii qofku waxba ku wacdiyi waayo, xafiiska
goobta ganasiga, tolka, iyo reerkaaga, waxuu noqonayaa qof aan naftiisa & diintiisa ku kalsoonayn, Ilaahayna wuu weydiinayaa aakhiro.
"In xikmada iyo waanada diinta islaamka dadka lla gaadhsiiyo waa waajib, taasoo sirta ku jirta tahay in dadku ku hanuunaan Ilaahay iyo diintiisa. Dariiqii cibaadada ahaa ee loo abuuray.
"Qofkii khayr ku baahiya aduun iyo aakhiraba wuu u aayi, Ilaahay agtiisana amaan ayuu kaga heli. Qofku isagoo fadhiya ayuu kelmad wanaagsan oo baraha bulshada uu geliyo facebook, whatsup ku hanuunin karaa boqolaal kun oo qof, ama uu telefishahanada uga sheegayo dadka is-caayaya, oo ku deminayo.
"Ummadaha samaystay aaladaha internet-ka, in badan oo ka mid ah hadafkoodu waa inay ummada ku haleeyaan, laakiin, waa inaynu ku dedaalaa inaynu ku hanuunino dadka. Qofka suxufiga ah ee wax qoraya ama kelmadaha culimada sii faafinaya, ee awoodii Ilaahay siiyey uga faa’iidaynaya ummada way anfaci doontaa.
"Waa in la helo balaayo kastoo la sheego, ciddi kheyr ku burburin lahayd.
"Qof walba waa inuu isku dayo siduu Ilaahay hortiisa iyo aakhiro markuu tago, diinta islaamka waxuu u qabtay, ee dadka wada isku garab-taagay, xoogiisana ku bixiyey, xoolahiisa ku bixiyey, aqoontiisa, iyo agabkiisa ku bixiyey.